Ny processeur iPad Pro A9X 9,7-inch dia voafetra | Vaovao IPhone
Rehefa nandeha ny fotoana nanomboka ny Apple dia hampiditra ny iPhone SE vaovao sy ny iPad Pro 9,7-inch vaovao, tsikelikely mahita data misimisy kokoa mifandraika amin'ireo fitaovana ireo izahay, angona izay tsy notaterina tamin'ny teny fototra. Ohatra iray mazava no hita ao amin'ny habetsaky ny RAM an'ny iPhone SE, izay farany 2 GB.
Saingy ny fahadisoam-panantenana dia avy amin'ny iPad Pro 9,7-inch tsy amin'ny lafiny iray, fa amin'ny roa. ny fifandanjana dia mety miovaova rehefa mividy ny iray amin'ireo maodely roa an'ny iPad Pro eny an-tsena ary ny processeur sy ny haben'ny fahatsiarovana.
Araka ny nambarantsika omaly, ny iPad Pro dia manana RAM 2 GB fotsiny, zavatra mahatsikaiky raha ny fikasan'i Apple dia ity fitaovana ity, toa ny zokiny lahy, Ho fiandohan'ny farany amin'ny solosaina finday sy ny solosaina findayny fomba fahazoantsika azy ireo hatreto. Ny zokiny kosa, manolotra antsika 4 GB RAM izay mamela ny fanavaozana hatrany ny rafitra fiasan'ny iOS haharitra ela kokoa nefa tsy dia tsikaritr'izy ireo.
Ny toetra iray hafa izay mety hidika fa ny mpampiasa dia manapa-kevitra ny maodely lehibe indrindra, ankoatry ny fahatsiarovana azy, dia entanin'ilay mpanodina, izay aorian'ny fizarana fari-pahaizana Manolotra antsika vokatra ambany kokoa noho ny zokiny lahy, ny iPad Pro 12,9-inch.
Amin'ny farany, ny tsy fitovian'ny vidin'ny iPad Air 2, izay manomboka amin'ny 429 euro amin'ny kinova 16 GB fototra sy ny iPad Pro 9,7-inch, izay manomboka amin'ny 689 euro, dia mety ho antony iray hafa manohy mividy ny maodely teo aloha, izay misy ny fahasamihafana lehibe amin'ny haavo fampisehoana dia ny processeur, satria mitovy tanteraka ny fahatsiarovana. Ny iPad Air 2 dia mampiditra ny processeur A8X amin'ny fampisehoana feno raha toa kosa ny iPad Pro 9,7-inch manome antsika ny processeur A9X fa misy fetrany voafetra ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny processeur iPad Pro A9X 9,7-inch dia voafetra
Ka ny iPad Pro 13, voafetra ihany koa ve? Sa tsy azoko ny tianao holazaina amin'ny voafetra .. Fa maninona izy ireo no manana A9X mitovy?
Cesar Adrian dia hoy izy:
Jose, heveriko fa tsy namaky na tsy nahafantatra izay novakianao ianao. Nolazainy fa voafetra izy io satria ny fitondrana ram (2gb) kely kokoa dia voafetra kokoa ny fahombiazan'ny a9x noho ny amin'ny 4gb.
Manantena aho izao fa afaka mahatakatra ianao.
Valiny tamin'i Cesar Adrian
Salama Cesar, efa namaky tanteraka aho, saingy misy fomba hanehoana ny tenanao sy amin'ny fahamarinana "voafetra" dia azoko tsara ny roa.
Ahem .. Ny fiara misy 120cb voafetra ary mety hanana 140, ny fiaran'ny fiaranay dia voafetra ho 220 ary mety hiakatra 240.
"Manantena aho fa afaka mahazo zavatra izao." Aleo avelanao irery io.
Heveriko fa diso toerana ianao raha mieritreritra fa ny fiara dia mitovy amin'ny iPad, na azo ampitahaina farafaharatsiny.
Miarahaba anao ary jereo ireo singa hardware, inona no afaka mametra ny 100 amin'ny processeur? Etc. Avelao kely ao anaty harona ny magazine an'ny fiara (tsara tarehy koa izy ireo)
iOS 9.3 dia manome iPads taloha sasany tsy misy ilana azy